Qiso : Ninkan Waxba Ma Xadin! - Xogside-news
Home BARNAAMIJYADA Qiso : Ninkan Waxba Ma Xadin!
Qiso : Ninkan Waxba Ma Xadin!
Markii maxkamadda la soo taagay ninkii tuugga, waxa doodii bilaabay garyaqaankiisa xirfadda iyo aqoonta sare lahaa waxaana uu yidhi isagoo xaakinka eegaya: “ Mudane Xaakin, ninkan muu jebin albaab oo sidaasi guriga kuma gelin, laakiin wuxu la kulmay daaqad furan oo guriga ka mid ah. Daaqadaasi furan ayuu gacantiisa (dhudhunka) geliyay ka dibna wuxu soo qaatay waxyaabo guriga dhex yaalay. Sidaasi awgeed cadaalad noqon mayso in lagu ciqaabo denbi aanu jidhkiisu wada gelin ee gacantiisa oo keliya gashay”.
Xaakinkii aya u jawaabay oo isna yidhi “ Dooda difaacaagu waa mid macquul ah, haddaba anigu waxaan sanad xadhiga ah ku xukumay gacantiisa ( dhudhunkiisa), marka waxa u banaan maxbuuska inuu gacantiisa jaro oo iyadu sidaasi sanadka xadhiga ah ku gasho jeelka, iyo inuu raaco oo la xidhnaado sanadkaasi jidhkiisa kalena. Maxbuuskii ayaa ka dibna hadlay oo yidhi waxaan dooraty in gacantaydu ay sanadkaasi keligeed xidhnaato oo aanan la xidhnaan” . Markii xaakinkii aqbaly ayuu Maxbuuskii iska saaray gacantiisa mise waxayba ahayd gacan qori ah oo loo sameeyay isagoo ah nin gacan la’”. Weligaa iska hubi tallaabooyinka aad qaadayso , go’aanka haku degdegin, ilaa aad xaqiijiso natiijada ka soo baxaysa. Amankaaga xaakinka.
Previous articleWasiirka wasaaradda horumarinta Beeraha oo ay weheliyaan masuuliyiin ka socday sanduuqa SDF, iyo masuuliyiin kale ayaa kormeer ku soo maray mashruuca dhaqaalaynta Ciidda iyo Biyaha ee degaanadda Xeego, Beden-bed, Dila iyo Jaarraa horato oo ka tirsan gobolka Awdal
Next articleDayuuradda Dhexdeeda Ayaa Lagu Siiyay Abaal Marin